अनुसन्धान मा स्नेह: स्वतन्त्र ब्राउजर डेटिङ अश्लील खेल
अनुसन्धान मा स्नेह द्वारा गुलाबी प्वाल सामूहिक
अनुसन्धान मा स्नेह थियो पहिलो drafted अगस्ट मा 2017 को: over the last3years, गुलाबी प्वाल सामूहिक छ, tirelessly काम प्रकाशित गर्न हाम्रो पहिलो अश्लील खेल भन्ने हामीलाई लाग्छ प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ! निर्माण मा एकता इन्जिन, हाम्रो टीम विश्वास छ कि रिया हुन जाँदै छ एक चकनाचूर हुनु-मारा अश्लील खेल शीर्षक यस वर्ष । जबकि हामी घृणा गर्न toot हाम्रो आफ्नै तुरही, मा एक छिटो नजर हाम्रो शीर्षक गर्नुपर्छ विश्वस्त गर्न तपाईं हाम्रो क्षमता को एक प्रकाशित गर्न विश्व-वर्ग खेल ।
याद गर्नुहोस् कि तपाईं खेल्न सक्छन् RSI चार्ज को पूर्ण मुक्त छ – बस एक खाता सिर्जना गर्न र प्राप्त गर्न खेल! हामी निर्माण हाम्रो खेल मा microtransactions मोडेल भनेर अर्थ, you don 't have to pay एक मुद्रा पूर्णतया आनन्द सारा शीर्षक if you don' t want to. तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ विकास समर्थन, तपाईं गर्न सक्छन् – बस को एक किन्न हाम्रो अद्वितीय सुविधाहरू मा स्टोर र अझ आफ्नो gameplay अनुभव!
यो सम्पूर्ण तपाईं माथि छ र हामी अगाडी देख छौं भएको धेरै horny gamers सकेसम्म खेल अनुसन्धान मा स्नेह: कुराहरू प्राप्त मसालेदार र हामी विश्वस्त छौं कि जो अधिक मान्छे खेल्न, यो बडा हाम्रो प्रशंसक आधार हुनेछ. एक आँधी गरेको मदिरा र हामी लागेका छौं, बाहिर आउन धेरै संग राज्यहरूbelarus. kgm – कि स्पष्ट देखि यो प्राप्त जानुहोस्!
पूर्ण बादल खेल देखि सबै ठूलो कम्पनीहरु
हामी सबैलाई थाहा छ रूपमा, समय देखि समय तपाईं अवरोध प्राप्त समयमा एक अश्लील खेल सत्र र आवश्यक चाँडै आफ्नो ब्राउजर बन्द (कि, वा तपाईं निर्णय गर्न यो समय अरू केही गर्न भन्दा संभावना, पछि busting एक नट!).
एक परिणाम रूपमा, तपाईं अक्सर आफैलाई पाउन भूल g बचत गर्न र गर्न संघर्षरत फिर्ता प्राप्त गर्न को राम्रो बिट, खेल भएको सट्टा माध्यम खेल्न सामग्री you ' ve already seen. हामी गर्यौं लाग्छ हल कि मुद्दा बनाएर सबै भन्दा राम्रो को एक बादल खेल वातावरण सम्भव कामुक खेल देखि सबै ठूलो कम्पनीहरु छ ।
पछि हरेक निर्णय, आफ्नो विकल्प हुनेछ सिन्क्रोनाइज गर्न हाम्रो सर्भर गर्न अनुमति, आउन र जान रूपमा तपाईं संग प्रसन्न गर्न कुनै आवश्यकता म्यानुअल तरिकाले बचत. तपाईं गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुअल तरिकाले बचत र लोड गरेर जाँदै खेल मा मेनु मोड अर्को समय, तपाईं खेल्न चाहनुहुन्छ, तर यो तपाईं सम्म पुरा हो! यो बादल सुविधा पनि दिन्छ हामीलाई समक्रमण गर्न आफ्नो उपलब्धिहरू सबै उपकरणहरू मार्फत र ब्राउजर तपाईं निर्णय गर्न खेल्न ।
हाम्रो उपलब्धि प्रणाली को एक छ. यो मा सबै भन्दा राम्रो ठूलो को आला वयस्क खेल – कुरा गरौं, एक सानो टुक्रा अधिक बारेमा कसरी यो काम गर्दछ र किन you might want to jump on board. यो केहि पनि विपरीत तपाईं पहिले देखेको छु – धेरै कि हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्!
उपलब्धिहरू मा रिया कामुक खेल सिस्टम
उपलब्धि प्रणाली यहाँ सिर्जना गरिएको छ संग एक्सप्रेस उद्देश्य संग तपाईं प्रदान गर्न सक्ने क्षमता रिप्ले खेल र जस्तै महसुस तपाईं अझै पनि छौं बनाउने समग्र प्रगति । संग प्याच 1.3, हामी शुरू नजिक 250 मा उपलब्धिहरू डायरी पृष्ठ. तिनीहरूले प्रत्येक संग आ आफ्नै व्यक्तिगत ट्रयाकिङ र पुरस्कार संग तत्काल एसएमएस देखाउने आफ्नो प्रगति मार्फत एक सूचना प्रतिमा.
अधिकांश पुरस्कार हो पहिले कहिल्यै देखेका को टुक्रा कलाकृति कि तपाईं खोल्न सक्छ, जब तपाईं चाहनुहुन्छ हुनत, केही संग तपाईं प्रदान गर्नेछ नयाँ NPCs अन्तरक्रिया गर्न, सुझाव कि स्क्रीन पनि प्रदर्शित कार्यहरू, गर्न आइटम प्रयोग र चरित्र लाभ तपाईं चयन गर्न सक्छन् कि सक्षम र अक्षम जब तपाईं इच्छा.
हामी थियो क्रेडिट पल्ट विस्तार र जोडी घटनाहरू
नयाँ घटनाहरू सबै प्रकारका लागि क्रेडिट को पट्टी चुनौतीहरू छन् पहिले नै उपलब्ध छ । कुनै एक पूरा भएको छ, हाम्रो सबै उपलब्धिहरू अझै (त्यहाँ केही साँच्चै कठिन व्यक्तिहरूलाई!) तर वरिपरि 20 खेलाडी भन्दा 90% of them. We ' ll be प्रस्तुत विशेष पुरस्कार प्राप्त गर्न पहिलो व्यक्ति को सबै प्राप्त गर्न प्रारम्भिक उपलब्धिहरू ।
त्यसैले यो हुन सक्छ एक विचार तपाईं को लागि खेल सुरु मा अनुसन्धान स्नेह तुरुन्तै – तपाईं विजेता हुन!
मा टालो 1.5, हामी एक थप्न जाँदै हुनुहुन्छ, केही थप उपलब्धि र, फेरि, पुरस्कार दिइनेछ बाहिर गर्नेहरूलाई व्यवस्थापन पूरा गर्न उपलब्धिहरू अघि others. यो जोडी क्रेडिट पल्ट सेवा गर्नेछन् लागि अन्य थुप्रै चुनौतीहरू पछि रिलीज मिति छ । त्यो भन्न को लागि पर्याप्त छ भने तपाईं छौं कि एक gamer रुचि समाप्त गर्न खेल बन्द पूर्ण, यो संग प्रदान गर्नेछ 100% लक्ष्य को लागि प्रयास गर्न.
चरित्र निर्माण-अप लागि महिला र पुरुष Protagonist
को एक धेरै मा अश्लील खेल, यो साँच्चै कुरा छैन कि सबै को बारे मा धेरै निर्णय तपाईं बनाउन सन्दर्भमा आफ्नो चरित्र प्रतिभा अंक र यति मा: मामला छैन जब यो आउँछ अनुसन्धान मा स्नेह छ । सबै तपाईं के प्रभाव हुनेछ, यो खेल को नतिजा र हामी विश्वास छ कि यो देखि सुरु गर्नुपर्छ को धेरै क्षण तपाईं लोड शीर्षक माथि!
तपाईं आफैलाई पाउन सक्छ खर्च 5-10 मिनेट अघि पनि सुरुदेखि खेल, बस सुनिश्चित तपाईं आफ्नो प्रतिभा अंक, निष्क्रिय रूख र सवा बाहिर क्रमबद्ध. तपाईं स्तर माथि मा रिया, you ' ll अनलक गर्न थप अंक बनाउन आफ्नो चरित्र बलियो र राम्रो in different ways.
हामी गर्यौं लाग्छ प्रहार एक ठूलो सन्तुलन भनेर यहाँ तपाईं विविधता सक्छ आफ्नो अनुभव, थुप्रै तरिकामा थप्दा व्यापक रिप्ले मूल्य र नयाँ कोण को सुलझाने समस्या रूपमा तपाईं उद्यम को माध्यम शीर्षक छ ।
धेरै लागि NPCs, संवाद विकल्प र गतिविधि विकल्प छन् gated पछि विभिन्न थ्रेसहोल्ड. खुसीको कुरा, यी विकास गर्न सकिन्छ मा-खेल प्रदर्शन गरेर निश्चित गतिविधिहरु (अध्ययन, काम, व्यायाम, आदि.) तर विचार छैन यो सबै सजिलै आउन! रिया एक चुनौती छ र हामी जस्तै यो बाटो ।
तातो वर्ण को RIS र आफ्नो विशेष सुविधाहरू
अधिकांश कार्य मा अनुसन्धान मा स्नेह मा ठाँउ लिन्छ माया गरेको घर, जहाँ हामी गरे यकीन छ कि धेरै कोठा आइटम लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ शरारती अन्तरक्रियामा छैन, बस माया ' s big ass. माया सामग्री पनि मुख्य आकर्षण किनभने त्यो हुन्छ हस्तक्षेप गर्न अन्य सबै वर्ण. नयाँ चरित्र लौरा चासो पनि छ, किनभने लौरा सामग्री भेटी सन्तुष्टि लागि कामोत्तेजक gameplay.
त्यहाँ पनि नयाँ इच्छित स्थान थियो भन्ने अनुरोध गरेर हाम्रो Patreon समर्थक । तिनीहरू चाहन्थे को वाहेक, एक बुटीक स्टोर र भनेर संग, हामी विचार को थप्दा छिमेकीलाई सामग्री संग, धेरै स्थान हुनेछ भनेर पनि ल्याउन सम्भाव्यता अधिक यौन सामग्री । संग बुटिक पसल जोडी, त्यहाँ थियो यो सुरु गर्न आवश्यक घटनाहरू हुनेछ भनेर दिन खेलाडी स्पष्ट कारण लागि दोकान आइटम. त्यसैले हामी जोडी मोटेल हव्वालाई सामग्री को एक श्रृंखला संग lingerie घटनाहरू ।
यति धेरै नयाँ वर्ण, पनि त्यहाँ थियो लागि आवश्यकता माया Reworked सामग्री । हामी जोडी छु परी पृष्ठ समावेश हुनेछ भनेर सबै नयाँ वर्ण र अन्तरक्रियामा लग, र नयाँ माया पाठ संदेश संग सम्पर्क रूपमा सेवा गर्नेछन् भन्ने लागि सर्टकट लूट कल. We ' ve पनि जोडी डायरी पृष्ठ दिनेछु जो तपाईं को धेरै मसालेदार विवरण ।
अविश्वसनीय खेल विकास लागि जटिल यौन मुठभेडों
सेक्स इन्जिन मा अनुसन्धान मा स्नेह शायद सबै भन्दा राम्रो मा वयस्क खेल विकास अहिले – केहि छैन हामी भन्न विश्वास बिना यो त! जब तपाईं अन्तरक्रिया संग यौन साझेदार मा अनुसन्धान मा स्नेह, you ' ll have एक व्यापक स्तर को नियन्त्रण कार्य भने तपाईं यति इच्छा. अब, यो पुरा सम्भव खेल खेल्न र सेक्स इन्जिन दृश्यहरु पूर्ण स्वचालित, तर हामी विचार भएको एक सानो नियन्त्रण छ, एक राम्रो कुरा समग्र ।
यी कामुक खेल तपाईं कसरी निर्णय भावुक वा कसरी फोहोर आफ्नो मुठभेडों हुनेछ । दर्जनौं छन् स्थान, देखि चयन गर्न विभिन्न स्थानहरुमा लागि सेक्स, गति नियन्त्रण, गहिराई स्तर र पनि आज्ञाकारी/मूख्य भूमिकामा कि तपाईं चयन गर्न सक्छन् कसरी निर्भर तपाईं जस्तै महसुस गरिरहेको कुरा । आवाज अभिनय बुट गर्न, यो साँच्चै एउटा अनुभव छ छौँ भनेर पाउन सङ्घर्ष अन्यत्र.
यो एक सेक्सी साहसिक हुनेछ भनेर तपाईं उठयो र fiddling with बटन all over the place. You might feel like you 're मा एक Airbus ककपिट मा सुरु, तर तपाईं एक पल्ट एक को टास्नु नियन्त्रण, you' ll be पुरस्कृत संग केही साँच्चै प्रभावशाली खेल मजा । यो बाहिर प्रयास गर्नुहोस् र आफैलाई लागि हेर्नुहोस् – यो stellar सामान!
बग तय र वर्ण को जोडी एक नियमित आधार मा
यो हुन सक्छ एक नयाँ खेल छ, तर यो पछि टीम छ धेरै वर्ष को अनुभव मा कामुक खेल विकास. यो बाहिर सबैभन्दा सफल शीर्षक त्यसैले सम्म, र सबै भन्दा ठूलो कम्पनीहरु मा आला लागि कामुक खेल किन्न खोजे हाम्रो परियोजना लागि आफूलाई । तर हामी थाह थियो कि त्यहाँ भनिने वेबसाइट patreon र बुझे कि हामी गर्न सक्छन् शो चलान आफूलाई with the help of our fans. र हामी व्यवस्थित गर्न बाहिर राख्नु कि एक उत्पादन आवश्यक थिएन पनि धेरै बग फिक्स पछि सुरुमा रिलीज । यो जान तयार थियो देखि बीटा संस्करण हो ।
तर छ तापनि कुनै आवश्यकता को लागि बग फिक्स, हामी छौं निरन्तर काम सुधार मा यस खेल. हाम्रो अधिकांश अद्यावधिक छन् जोडने को लागि दोकान आइटम, यस्तो lingerie outfit र सेक्स खिलौने. हामी पनि तय numerus संवाद त्रुटिहरू थिए कि कारण विकास निर्माण संघर्ष संग खेल एन्ड्रोइड भाषा ।
सबैभन्दा अनुरोध सुविधा को लागि खेल थियो धोखा मेनु । इमानदार, टीम को मीठो स्नेह छैन रोमाञ्चित भएको धोखा मेनु मा खेल किनभने, हामी यो जस्तै महसुस lessens अनुभव छ । तर हामी विश्वस्त थिए अन्तमा यो सुविधा थप्न गरेर के हाम्रो समर्थक हामीलाई भन्नुभयो । जोडेर एक धोखा सुविधा दिन हामी खेलाडी को मौका गर्न फिर्ता जान र आनन्द आफ्नो मनपर्ने वर्ण. स्पा पक्ष वर्ण थिए मुश्किल पुग्न ।
अब स्पा खुला स्थान किनभने cheats मेनु, सबैलाई आनन्द उठाउन सक्छौं केली स्तर, जो हामी योजना मा राखन रूपमा एउटा इस्टर अन्डा । हामी अब उल्लेख गर्न, रूप, गोप्य स्तर । त्यहाँ अझै पनि छ एक इस्टर अन्डा मा खेल, र कोही होइन छ, यो खोज अझै छ ।
जासूस Cams र तत्काल एसएमएस देखाउने भविष्य अद्यावधिक मा
I don ' t want मा प्राप्त गर्न खेल विकास chit-chat, तर ठूलो कुरा हुनेछ आउन भविष्यमा अद्यावधिक र समझौता को RSI. तपाईं लाग्छ भने यो खेल छ के ठूलो कम्पनीहरु चाहन्थे, आफूलाई लागि waif सम्म तिनीहरूले देख्न के को एक मुट्ठी horny समर्थक भर भनिने वेबसाइट Patreon र एक टीम खेल को devs संग धेरै वर्ष को अनुभव निर्माण गर्न सक्छन् जब तिनीहरूले वास्तवमा हेरचाह बारेमा आफ्नो परियोजना ।
यो हेजेल सामग्री अपडेट संग intro घटना र कफी शप कार्य केही थियो के तुलना हामी काम गरिरहेका छौं । नयाँ लुसी स्तर हुनेछ भनेर आएको आउनेछन् अर्को र लुसी केली घटनाहरु दोब्बर हुनेछ घटनाहरू कुल मा खेल.
एसएमएस समारोह पनि हुनेछ पछि सुधार हुनेछ परिवर्तन लग बक्स हटाइएको को खेल मेनु UI.
नयाँ टालो पनि आउन संग जोडी जासूस cams, जो खोल्न हुनेछ संभावना माथि लागि यति धेरै किंक खेल्न । यो एकीकृत गरिनेछ संग जेन सामग्री छुटाउन सन्तुष्टि लागि सबै spycam fetishists देखि छिप एक ठूलो आला लागि कामुक gamers.
अब: कसरी तपाईं साइन अप र लग मा अनुसन्धान मा स्नेह प्रयास गर्न यो खेल आफैलाई लागि बाहिर? सम्झना, हाम्रो खेल सधैं हुनेछ 100% मुक्त र तपाईं खेल्न सक्छन्, यो कुनै पनि उपकरणमा!